Somaliland oo dawladda Faderaalka ku eedaysay dagaalka Tuka-raq - BBC News Somali
15 Maajo 2018
Wararka ka imaanaya deegaanka Tuka-raq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in uu joogsaday dagaal xooggan oo saaka halkaasi ku dhexmaray ciidamada Jamhuuriyada iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland iyo maamul goboleedka Puntland.
Labada dhinac ayaa kala sheegtay inay guulo ka gaareen dagaalka, waxaana hawada ka maqan isgaarsiinta deegaankaasi.
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, oo maanta khudbad ka jeediyay munaasabadda 18-ka May oo waqtigeeda laga soo hormariyay Ramadhaanka awgii, ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka ah inay ka dambeyso dagaalka Tuka-raq.
"Waxaan qaranka Somaliland u sheegayaa in ciidammadu ay guul la taaban karo ka gaareen dhammaan jihooyinkii laga soo weeraray, oo ay waliba jabiyeen hubna ka futeen ciidankii". ayuu yiri Muuse Biixi.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, oo maanta khudbad ka...
Posted by BBC News Somali on Tuesday, 15 May 2018
Wasiirka Warfafinta Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo BBC-da la hadlay ayaa isna sheegay in ciidammadooda la soo gardaraystay balse ay iska caabiyeen.
Somaliland iyo Puntland oo ku dagaalamaya Tuka-raq. Wasiirka warfaafinta Puntland oo BBCda la hadlay ayaa ka warbixinaya halka ay wax marayaan. https://bbc.in/2L2WMZ9
Posted by BBC News Somali on Monday, 14 May 2018